မိဘများကိုအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်စေ - Santa Claus မတည်&# | Apg29
မိဘများကိုအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်စေ - Santa Claus မတည်&#
လွတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်စိုးရိမ်ထိတ်လန်။ ရုပ်ပုံ: Youtube ကို / SVT ။
ပင်အချို့သောခရစ်ယာန်များသည် - နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခရစ္စမတ်အချိန်တွင်မိမိတို့၏ကလေးများခိုင်ခိုင်လုံလုံအတွက်ယုံကြည်ဖို့အများကြီးလူကြီးများသင်ယူခြင်း။ ဒါကသူတို့သားသမီးလှည့်စားခြင်းနှင့်လှည့်ဖြားရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကခိုင်ခိုင်လုံလုံအတွက်ယုံကြည်ဖို့သူတို့ကိုသင်ပေးမနေသင့်ပေမယ့်သူတို့ကိုသင်သညျယရှေုပေးသင့်ပါတယ်!
ထွန်းပြက္ခဒိန် "ဟုအဆိုပါအချည်းနှီးသောဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ထိတ်လန့်" ၏ပထမဦးဆုံးအပိုင်းအချို့မိဘများ, ဟုတ်ကဲ့တောင်မှမီဒီယာအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်စေခဲ့သည်။ အမည်ရကြောင့်စန်တာမတည်ရှိပါဘူးကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်တကား!
"ကျနော်တို့ကတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့သည်!" SVT ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်မိဘတစ်ဦး program ကိုမွငျလြှငျအပြီးရေးသားခဲ့သည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေ Santa Claus ယုံကြည်ယခုအခါကျနော်တို့ကဒီမှာထိုင်နှင့်မေးခွန်းများကိုအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ခြင်းကိုဤအကြောင်းကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ "
"ကျနော်တို့ကတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့သည်! အမြိုးသားအဤအချက်ကိုကြည့်ရှုအားဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်လျှင်မသိရပါဘူး။ "
Donald Trump အမှန်တရား
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုစန်တာရဲ့တည်ရှိမှုကိုအလွန်အထိခိုက်မခံဖြစ်ရှိပုံရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပင်အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump သူ site ရဲ့တည်ရှိမှုကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့ Boot တက်။
7 နှစ်အရွယ် Collman လွိုက် Donald Trump ၏တက် လာ. ဖုန်းကို-in ကို လယ်ကွက်ပေါ်မှာ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမစန်တာကိုယုံကြည်ဖို့အသက်ကြီးလွန်းခဲ့ပေမယ့်တစ်မိသားစုစစ်ဆင်ရေးသူမ၏ယခုစန်တာရဲ့တည်ရှိမှုကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့မဖန်ဆင်းတော်မူပြီဆိုပါကသူအံ့ဩကြ၏။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူမကူညီနိုင်ပေမယ့်ဒီမုသားတွေနဲ့သူတို့သားသမီး indoctrinate လျှင်ကား! သူတို့ကြောက်လန့်ကဘာတွေလဲ? သမ္မာတရားကိုတကယ် Santa Claus မတည်ရှိပါဘူးကြောင့်ဖြစ်သနည်း
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် "တစ်ဦးကအံ့သြစရာမုသား" ဟုကျွမ်းကျင်သူများရေး Boyle နှင့် McKay Santa Claus ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသူကိုမိဘများကသူတို့ကလေးတွေနဲ့အတူဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကလေးကသည်အခြားအခင်းအကျင်းမှာသူတို့ရဲ့မိဘများ၏ထင်မထားဘူးထဲမှာ generate နိုင်ပါတယ်။
"ကလေးအားလုံးနောက်ဆုံးမှာသူတို့နှစ်ပေါင်းအဘို့ထိုသူတို့မှလဲလျောင်းခဲ့ကြရတယ်, ဤလည်းမုသာစကားကိုသောသူတို့သင်ယူအခွားအဘယျအမှုအရာသည်အံ့ဩဖို့သူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါအထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်" ပါမောက္ခ Boyle ကပြောပါတယ်။
Santa Claus မတည်ရှိပါဘူးဆိုရင် "Fairy ရှိပါသလဲ ပဉ္စလက်ဖြစ်သနည်း ဘုရားသခင့လား? မိဘများဒီတော့အထူးနှင့်မှော်တစ်ခုခုအကြောင်းကိုအိပ်ရနိုင်ကြသည်ဆိုရင်သူတို့ကယ့်ကိုပညာနှင့်သမ္မာတရားကိုကာကွယ်အဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချရနိုင်သနည်း ကလေးတွေဒဏ္ဍာရီမျိုးကိုယုံကြည်ဖို့ရရန်ကိုယ်ကျင့်တရားကိုမေးခွန်းထုတ်ရမည်ဖြစ်သည် "ဟုအဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများရေးသားခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်သူတို့ကိုယေရှုအကြောင်းအမှန်တရားနှင့်မရပြည်မှမုသာသင်ပေးဖို့ပိုကောင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်သင်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်တယ်, မိမိတို့ကိုယ်၌မိမိတို့ယုံကြည်ကိုးစားရာ fixed ပါလိမ့်မည်ပြောတိုင်းအပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်။
ငါ elf-ယုံကြည်ချက်သားသမီးတို့အဘို့ထက်လူကြီးများအတွက်ကပိုအရေးကွီးကွောငျးသံသယရှိကြသည်။ အဲဒီမှာ Santa Claus ယုံကြည်သူရံဖန်ရံခါရှုပ်ထွေးအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အများစုမှာမကျင့်။ အဘယ်ကြောင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤအတူကလေးအနားတွင်ပုန်းသင့်သလဲ
Santa Claus ယုံကြည်သောသူတစ်ဦး Asatru လူကို - ခရစ္စမတ်နဲ့ဧဝကို 2007 ခုနှစ်မတိုင်မီတစ်ဦးကတစ်ရက်, ငါသည်ဤသို့သောရှုပ်ထွေးလူတစ်ဦးအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့၏။ သူကစန်တာကသူကသူ့အိမ်တွင်သူတစ်ဦးဝိညာဉျကိုဖြစ်လျက်ရှိကယုံကြည်သည်။ သူသည်နတ်ဆိုးစွဲဖော်ပြထားတယ်!
ဤသည်ကို Santa Claus ကယ့်ကိုအချည်းနှီးသောကောင်းသောဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Santa Claus အစားယေရှု၏ကိုယ်တော်၌ယုံကြည်ဖို့လှည့်ဖြားလူတွေကိုလိုလားသူဆိုးသောဝိညာဉ်သည်!
စိန့်က Nicholas 300 ရဲ့အပေါ်အနောက်တောင်ပိုင်း Lille-အာရှရှိ Myra ၏ဘိရှော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကရက်ရက်ရောရောကြောင့်သူသည်သူတော်စင်ကြေညာခဲ့သည်။
စိန့်က Nicholas ဒဏ္ဍာရီအဆိုအရအများအပြားကငျြ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကညဉ့်၌သူတို့မှာပိုက်ဆံနဲ့ပေါက်နေဖြင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကနေမိသားစုသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်တပြိုင်နက်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ Santa Claus အဖြစ်လက်ဆောင်တွေပေးခဲ့တယ်!
သို့သော်က Nicholas ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်နှင့်အတူလည်းဖြစ်ခဲ့သည်သေပြီနှိုး။ သူကပင်သင်္ဘောသားမုန်တိုင်းများအတွက်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်အကြောင်းခဲ့ကြသည်ကယ်လွှတ်တော်မူ၏။
က Nicholas beatified ခဲ့သောအခါသူပိုင်းတွင်အများဆုံးသင်္ဘောသားများကချီးကျူးခဲ့သည်။
မိမိနေ့ firads ကက်သလစ်ကျောင်းများအတွက်ခရစ္စမတ်ပြဇာတ်နှင့်အတူဒီဇင်ဘာလ6။ ကောင်းသောဘူးသောအမြိုးသားအလက်ဆောင်တယ်။
ကောင်းသောသို့မဟုတ်ဘက်မှာအပြစ်မပြဘူးသည်သူများသည်စိန့်က Nicholas ဦးဆောင်အဖြစ်ဝတ်ဆင်တဲ့မာရ်နတ်ကိန်းဂဏန်းအားဖြင့်ဆန်တစ်အရသာတယ်။
အင်္ဂလိပ်လိုစိန့်က Nicholas ပြီးနောက် Santa Claus Santa Claus အဖြစ်လူသိများနိုင်ငံများတွင်စကားပြော။
ဖျက်သိမ်းသူတော်စင်ကိုးကှယျခွငျးကွောငျ့အကသူ၏လူကြိုက်များ၏, စိန့်က Nicholas ဖျက်သိမ်းနိုင်ဘူးအခါပြုပြင်ခြင်းစဉ်အတွင်း။
ထိုအခါသူတို့ကသူ့ကို Santa Claus ဖြစ်စေ! သူဟာဘိရှော့ရဲ့ဦးထုပ်မပါဘဲထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
က Nicholas ဒီဇင်ဘာလတွင်ကွယ်လွန်သွားကြသောကြောင့်, သက်ကရာဇျစဉျ, ဒီကောင်းစွာတပ်ဆင်။ ယခုသူ Santa Claus အဖြစ်ခရစ္စမတ်နှင့်ဆုကြေးဇူးကို-ပေးကမျးနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
Santa Claus ၏ယနေ့ယူဖောက်ပြန်အခြားယူမှားခြင်းမှ, အရှင်ဝေါဟာရနှင့်အရာယနေ့ထက်ပိုသေသူတော်စင်ထက်အချည်းနှီးဖြစ်၏။
2017 အသုံးပြုပုံသတင်းစာကတွေ့ရှိခဲ့သောကမ္ဘာ့သမိုင်းရေးသားခဲ့သည် တင်ပါးဆုံတွင်းအရိုး Nicolaus မှ။
Santa Claus ။
၏ကျန် Santa Claus ရဲ့အကြွင်းအကျန် တောင်ပိုင်းအီတလီအတွက် Basilica di စန်း Nicola အတွက်ဖြစ်ဟုဆိုသည်။ သူက 150 အကြောင်းကိုစင်တီမီတာ၏သေးငယ်တဲ့, ဂျပိန်သူဖြစ်၏။
ဒါကြောင့်အားလုံးမှာမယ်ဆိုရင် Santa Claus သူသည်ယနေ့အသေခံခြင်းအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးပါပြီ! ကက်သလစ်ကမ္ဘာကြီး၌ကြီးသောပွဲတော်နှင့်အတူဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကသူသေဆုံးကျင်းပခဲ့သည်။
အမြားအပွားကို Santa Claus များအတွက်ကလေးငယ်များအတွက်ယုံကြည်ထို့ကြောင့်သူ့ကိုအရမ်းအမရအလေးပေးသူတို့ကိုယ်သူတို့ပူးတွဲရန်သွန်သင်ဖြစ်ကြောင်းရုံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Santa Claus သဘာဝလွန်အင်အားကြီးတွေနဲ့ပုံဖော်သည်သူကလေးများကောင်းသောပါပြီလျှင်သူလည်း "နေရာအနှံ့" ဖြစ်ပါတယ်သိတယ်သောအဓိပ္ပာယ်မှာ "All- သိ. " ဖြစ်ပါတယ်။
သူကကြင်နာနှငျ့ "ကောင်းသော" တစ်လျှောက်လုံးနှင့်လက်ဆောင်များနှင့်လက်ဆောင်တွေအများကြီးနဲ့အတူရုံလွှမ်းမိုးသောအဖြစ်ဖော်ပြနေသည်။
တနည်းအားဖြင့်ဘုရား! သူ့ကိုဓါတ်ပုံတွေကိုလေ့လာနေသည့်အခါဤသည်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်တုကို - သူကဘုရားတူ!
ယနေ့ Santa Claus သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းကနေရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကက်သလစ်သူတော်စင်, တောင်သူလယ်သမားလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ခရစ္စမတ်ဆိတ်သငယ်ကိုအနေ vresige ခြံကွက်!
နှုတ်ကပတ်တရားတော် "brownie" ဘာသနည်း အဆိုပါစကားလုံးကြံစည်မှု bisse တစ်ဦးကိုတိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံစံအလွတ်များနှင့်စကား bise ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဦးခေါင်းထိပ်ခွေး, ဒါမှမဟုတ်ပင်စတော်ဘယ်ရီကိုဆိုလိုသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်မလေးတစ်နှစ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပြောကြား "ငါယေရှုသည်သော်လည်းမ Santa Claus အတွက်ယုံကြည်ပါတယ်။ " ဒါဟာပညာရှိတဲ့ကလေးကဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါပေမဲ့တချို့လူကြီးများ, တစ်နှစ်ပြီးနောက်သူတို့နှစ်ကအဖြစ်ပညာရှိသောသူကဲ့သို့ရှိမြေပေါ်တွင်ငယ်လေးတွေ၏ဆွဲဆောင်ဖြစ်မထင်ကြဘူး။ ကလေးတွေစန်တာကိုယုံကြည်ဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်အဘယ်ကြောင့်ငါနားမလည်ကြဘူး။ ကလေးများအရွယ်ရောက်ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုအတွက်ခြောငျးသည်အထိအဘယ်သူမျှမ tomtetro ရှိသည်။ သူတို့ဘုရားသခင်နဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုကြားရကြပြီမတိုင်မီသို့သော်ကလေးအားလုံးသုတေသနအရသိရသည်သူတို့၏စိတ်နှလုံး၌ဘုရားသခင်အတွက်ယုံကြည်ချက်ရှိသည်။ ဒါဟာသုတေသနဒေသနာ 3:11 တှငျလညျးကမျြးစာကိုအတည်ပြု။
ကျနော်တို့ခရစ္စမတ်အကြောင်းကိုကြွေးကြော်, ကြှနျုပျတို့ကိုးကှယျသူကိုအဘယ်သူနည်း ယေရှုအကြောင်းပြောဆိုရန်အချိန်ပါပဲ။ မှန်ပါသည်, အဲဒါကိုခရစ္စမတ်, ယရှေုမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သူကမွေးဖွားခဲ့သည်ကြောင့်ညီတူညီမျှသမိုင်းဆိုင်ရာအချက်ဖြစ်ပါသည်!
နှင့်ခရစ္စမတ်မှာများသောအားဖြင့်ယေရှုမြေကြီးမှမွေးဖွားခဲ့သည်ကြောင်းအလေးအနက်။ အဘယ်ကြောင့်သူမွေးဖွားခဲ့သည်? သင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင် - သူကယ်ဖို့မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသေဆုံးနှင့်အမြင့်တက်ဖွငျ့ဤအမှုကိုပြု၏။
ယာကုပျ 1:17 ။ ကောင်းသောအမှုသည်ပြီးပြည့်စုံသောဆုကြေးဇူးကိုအဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်အကြားမျှ switching ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူအလင်းအိမ်၏အဘ, ကနေဆင်းလာမယ့်အထက်ကနေဖြစ်ပါတယ်။